५ वर्षमा १५ विमान थप्ने निगमको योजना, १ खर्ब कहाँबाट ल्याउने ? « GDP Nepal
( Monday, January 18, 2021)
५ वर्षमा १५ विमान थप्ने निगमको योजना, १ खर्ब कहाँबाट ल्याउने ?
Published On :3August, 2018 8:52 am
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आउँदो पाँच वर्षभित्र १५ वटा नयाँ जहाज खरिद गर्ने भएको छ । निगमले आन्तरिक उडानसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि यो संख्यामा जहाज खरिद गर्ने योजना बनाएको हो ।
तर, निगमले चाहेरमात्र यो संख्यामा जहाज खरिद गर्न सक्दैन । यसका लागि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चाहिने भएकाले सबै रकमका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा भर पर्ने अवस्था पनि रहँदैन ।
यस्तै, हालको आम्दानीबाट हुने वार्षिक अनुमानित १० अर्ब नाफाले भने हालै खरिद गरिएका ४ वटा जहाजको साँवाब्याज बापतको किस्ता तिर्नै ठिक्क हुने देखिन्छ ।
निगमको जहाज खरिदमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक भइदिने हो भने असम्भव भने छैन । अर्थले ट्वीनअटरका लागि आफैं बजेट विनियोजन गरिदिने र ठूला जहाजका लागि जमानी बस्ने हो भने निगमको योजना पूरा हुन सक्छ ।
निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि वाइडबडी र न्यारोबडी गरी १० वटा र आन्तरिक उडानका लागि ५ वटा ट्वीटअटर जहाज खरिद गर्ने योजना छ । ३ वर्षअघि एयरबस कम्पनीका २ वटा न्यारोबडी जहाज खरिद गरेको निगमले हालैमात्र २ वटा वाइडबडी जहाज पनि ल्याइसकेको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको बोइङ कम्पनीको ७५७ जहाज विस्थापन गरी एयरबस कम्पनीकै जहाज ल्याउन निगम जुटेको छ । निगमको आगामी कार्यदिशाअनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई व्यापारमा ६० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आन्तरिक उडानका लागि चिनियाँ जहाज चलाउन नसके पनि निगमले थप ५ ट्वीनअटर जहाज खरिद गरेर दुर्गममा सेवा बढाउने लक्ष्य राखेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा उडान निगमले नाफाका लागि नभइ सेवामुखी भावनाले सञ्चालन गर्नेछ ।
निगमले थप जहाज भित्र्याए पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन गर्न भने सम्भव छैन । निगमका नयाँ जहाज गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले अबको पाँच वर्षमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अहिलेको क्षमतालाई दोब्बर वृद्धि गर्ने जनाएकाले जहाज थप्न समस्या हुने छैन ।
यस्तै, निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउने छ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ ।
तर, ५ वर्षभित्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि यो भने पूरा हुने सम्भावना देखिएको छैन ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेसँगै विमान थप्ने र विमानस्थल निर्माणलाई गति दिने काम एकसाथ अघि बढेको छ ।
महासंघ रोजगारदाता परिषद् पूर्ण, सीएनआई र चेम्बर पनि आमन्त्रित सदस्य
काठमाडौं ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोसिएटतर्फका उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाईको अध्यक्षतामा महासंघको रोजगारदाता परिषद गठन भएको छ । परिषद्को उपसभापतिमा महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्य प्रवलजंग पाण्डे चुनिएका छन्। परिषद्का सदस्यहरूमा एशोसिएट समूहबाट महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य कृष्णलाल महर्जन, महासंघको पूर्व कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू ई. विनोदढकाल, विराट थापा, नेपाल जुट उद्योग संघका राजकुमार गोल्छा र प्रतिनिधि डावर नेपाल चुनिएका छन् । त्यसैगरी वस्तुगत संघ समूहबाट परिषद्को सदस्यहरूमा महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य अरनिको राजभण्डारी, नेपाल तयारी पोशाक संघका इमानसिंहलामा, जिल्ला नगर समूहबाट सदस्यहरूमा उद्योग संगठन मोरङका राकेश सुराना, प्रतिनिधि वीरगंज उवासंघ, प्रतिनिधि सिद्धार्थनगर उवासंघ छन् । प्रदेश समूहबाट परिषदको सदस्यहरूमा प्रदेश १ बाट महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र राउत, वागमती प्रदेशबाट महासंघको कार्यकारिणी समितिसदस्य दिलसुन्दर श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशबाट लक्ष्मी प्रसाद त्रिपाठी, लुम्बिनी प्रदेशबाट दिपक पौडेल चुनिए । अन्य क्षेत्र र वर्ग मध्येबाट परिषद्को सदस्यमा विनय उपाध्याय, शाजन शाक्य, शोभा ज्ञवाली, वावुकाजी कार्की चुनिएको जनाइएको छ । परिषद्को आमन्त्रित सदस्यहरूमा क्रमशः प्रतिनिधिहरू नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्स, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका ई. आङ दोर्जी लामा(ए.डी.), एनसेल नेपाल प्रा.लि.का रमेश घिमिरे र नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघका रामेश्वर शाह रहेको जनाइएको छ ।
मुलुकबाहिर बसेर नेपालको समृद्धि सम्भव छैन: नेपाल
रोजगारीको खोजीमा रहेका शिक्षित युवा र सक्षम जनशक्तिको खोजीमा रहेका रोजगारदाता कम्पनीबीच एउटै थलोमा अन्तक्र्रिया
वैदेशिक व्यापार घटे पनि व्यापारघाटा प्रतिदिन ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ !
ठमाडौं । मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा भारी गिरावट आएको छ भने केही महिनादेखि सुधारको लय पक्रिरहेको